'म्यान एन्ड मेटिरियल्स' - रुकमाङ्गद कटवाल - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / नसोधिएको प्रश्न / ‘म्यान एन्ड मेटिरियल्स’ – रुकमाङ्गद कटवाल
१९९० सालमा जापान र बेलायतले विभिन्न सहयोग गर्छु भन्दा त्यतिबेलाका शासकले पैसा दिने भए देउ अरु कुरा लिन्न भने भनेर इतिहासमा लेखिएको छ । २०४५ सालमा त्यस्तो जरुरत परेन । कसैसँग गुहार पनि मागिएन र भित्रैबाट विपद्को सामना गरियो । विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन विदेशी सेना आएको यो नै पहिलो हो ।
यो चलनचल्ती नै हो । हामी विदेशी सहयोग चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पनि थिएनौं । हाम्रा संस्था तयारी अवस्थामा समेत थिएनन् । यति ठूलो भूकम्प आउला भनेर कसैले अनुमानसमेत गरेको थिएन । हालांकी हरेक माघ २ गते भूकम्प आउँछ भनेर कुराकानी त हुन्थ्यो तर तयारी त केही पनि रहेनछ भन्ने देखियो । त्यो त खाली टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा आउनेमात्र रहेछ । फेरि भूकम्प आउँदा के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने पनि बारम्बार आइरहन्थ्यो । यही दिन, यति रेक्टर स्केलको आउँछ भन्ने थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अलिकति पनि तयारी रहेनछ भन्ने छर्लङ्गै भयो । भौगोलिक संवेदनशीलता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रको आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । त्यो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने बेला पनि यस्तै हो । मानवीय सहायताका नाममा विभिन्न खेल हुन्छन् । चलखेल हुन्छन्, संसारको जहाँसुकै हुन्छन् । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो । उनीहरुलाई कुन सीमाभित्र राख्ने भन्ने राज्यले निर्णय गर्ने हो तर राज्यले त्यतिबेला त्यो गर्न सक्दैन जतिबेला राज्यका सबै संयन्त्र शिथिल भइसकेका हुन्छन् । जब उनीहरुसँग सामना गर्ने सामथ्र्य हुँदैन, क्षमता र बुद्धि पनि हुँदैन । ऊ यसै पनि कमजोर देखिन्छ । अर्को कुरा जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ राज्य त्यसरी नै चल्छ । निर्णय गर्ने नेतृत्वले हो । जुन देशको नेतृत्वले ‘म्यान एन्ड मेटिरियल्स’को व्यवास्थापन गर्न सक्छ त्यो जहिले पनि सफल भएको देखेका छौं । सायद योभन्दा गाह्रो कुरा अरु छैन पनि होला ।
नेपालको भूगोल विचार गर्ने हो भने यहाँ हेलिकप्टर नभई नहुने चिज हो । सेनासँग दर्जनौं हेलिकप्टर छन् तर मेन्टिनेन्स हुन सकेका छैनन् । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएपछि मेन्टिनेन्स हुन सकेन । त्यो नभएपछि सबै हेलिकप्टर ग्राउन्डेड भएर बसे । सेनाले हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि रकम माग्छ, पर्याप्त पाउँदैन । हाम्रा कयौं नेतृत्व वर्ग सेनाको हेलिकप्टर मागेर चढ्छन् तर पैसा तिर्दैनन् । केही पर्योै भने राति नै तुरुन्त हेलिकप्टर उडाउनुपर्योम भन्छन् । त्यो हेलिकप्टर यसै जाँदैन । त्यसलाई उडाउने मान्छे, पाटपुर्जा मेन्टिनेन्स गर्नुपर्छ । त्यसलाई एकदमै ठीक अवस्थामा राख्नुपर्छ, नत्र सानो गल्तीले ठूलो क्षति हुन्छ । यसलाई सही अवस्थामा राख्ने कर्तव्य त राज्य नेतृत्वको हो । सेनाको प्रमुखलाई बेलाबेलामा बोलाएर हेलिकप्टर कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के गर्नुपर्छ भनेर सोध्ने काम नेतृत्वले गर्नुपर्दैन ?
सेनाले ‘कु’ गर्न लाग्यो भन्नेसम्मका कुरा बाहिर आए, यो सरकार र सेनाबीचको असमझदारीको परिणाम हो ?
सेनाले जरुर सरकारमाथि प्रभाव पार्न सक्छ । सेनाले पनि आफूलाई चाहेको, लागेको कुरा भन्ने हो तर निर्णय त राजनीतिज्ञले ने लिने हो नि ।